Fresh Colours Canvas Bag - Buddhatrends
FREE SHIPPING WORLDWIDE EO AMIN'NY FITSARANA, TSY AFAKA TANTERAKA ANY AMIN'NY FANDAMINANA MANDRAKIZAY
Coral sy Orange Dresses
Hijery ny ambany rehetra
Pusters sy Pullovers
Kiraro & lamba rongony
Fampiononana tsy misy fampiofanana
Fomba tsy mahazatra
Fresh Colors Canvas Bag
Lafo daholo $60.18
Fiverenana sy fifanakalozana
Milahatra Material: Cotton
Pattern Type: mafy
Interior: Cell Phone Pocket, Lolo Zipper Pocket
Main Material: lamba
Hazavao / andilany Type: Soft tahony
Fanoloana, famerenana sy famerenana:
Mba hamerenana ilay entana tsidiho azafady ny pejy Facebook-ndryhttps://www.buddhatrends.com/pages/returns-exchange
Ampahany amin'ny fepetra ilaina amin'ny fandefasana ny sarin'ilay zavatra simba / tapaka. Hanampy be tokoa raha mandefa sary mazava momba ilay hadisoana ianao.
Raha toa ka tsy diso ilay singa ary te hiova fotsiny ianao noho ny habe / loko na tsy tiany ilay izy, dia azo averina indray mandeha indray izany. Ny mpanjifa dia tompon'andraikitra amin'ny fandoavana ny fandefasana entana, ny fikarakarana ary ny fiampangana indray.
TOKOA MISY: Nolazainay ny antsipiriany rehetra ao amin'ny rohy momba ny vokatra tsirairay miaraka amin'ny fepetra marina amin'ny santimetatra, azafady azafady raha tsy mametraka ny baiko ary misoroka ny tsy fahasambarana aorian'izay.
Ny rafitra fanaraha-maso ny kalitao dia tena azo itokisana, saingy mety hitranga ny tranga tsy ampoizina. Raha sendra misy loko ratsy na loko, mifandray avy hatrany amin'ny fanohanan'ny mpanjifa, dia manome antsika ny sarin'ilay singa hamaha ilay olana faran'izay haingana.
Tadidio fa ny adiresy fandefasana sy famerenana dia miovaova arakaraka ny firenenareo sy ny tahirinareo. Noho izany dia manoro hevitra mafy izahay fa hanaraka ny dingana ao amin'ny rafitra fitantanana momba ny fitantanana izahay raha ny antsipiriany rehetra, ny adiresy fivoahana ary ny torolàlana dia ho hita ao anatin'ny rafitra fitantanana fiverenana.
Amin'ny tranga fampiasana, na voasasa, na simba na fanovana hafa avy amin'ny fepetra voalazan'ny zavatra, dia tsy afaka manome vokatra haingana isika. Ny politikan'ny fiverenana dia manambara mazava tsara ireo fepetra ireo ao anatin'ny fe-potoana politika. Na inona na inona tsy misy ny fepetra voalohany miaraka amin'ny fonosana dia tsy azo ekena.
Ampiasao ny safidy mora vidy azo ampiasaina ao amin'ny firenenao. Amin'ny tranga iray izay notanana amin'ny fomba amam-panao, dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fandoavana ny haba / amporisihan'ity singa ity isika.
Ho an'ny politikam-piverenana dia tsy maintsy amaritana ny fonosana ny "Valin'ny valiny 0 $ Value."
Ho an'ny fanafoanana ity zavatra ity, dia mila mandefa antsika ao anatin'ny ora 12 ny fametrahana ny baiko. Ireo entana izay indray mandeha dia tsy azo esorina.
Ny famerenana amin'ny laoniny dia tsy azo atao raha toa ka averina amin'ny endriny voalohany sy ny fepetra tsy mendrika. Ny fitadiavana tsy maintsy atao dia tokony homena refy.
Ny refund dia averina indray maka miankina amin'ny fomba fanefitra mpanjifa voalohany rehefa manao ny baiko. Ny fandaniana Paypal dia natao amina andro mitovy amin'ny handraisana ny singa amin'ny alàlan'ny adiresy naverina nomena izay mety tsy mitovy amin'ny toerana misy ny mpanjifa mba hisorohana ny fiampangana am-bidy. Ny karatra ara-bola dia mitaky ny andro 10-15 amin'ny ankapobeny raha toa ka fotoana fialan-tsasatra ho an'ny famerenana izany.
Ny fandoavam-bola indray dia azo alaina amin'ny fiverenana / fifanakalozana / fanoloana fa tsy mihoatra ny 25% amin'ny totalin'ny filaminana.
Ny ekipa mpanohana anay dia vonona mandrakariva hanamora ny mpanjifa. Mila mampiasa ny pejy "Contact Us" fotsiny ianao raha misy fanontaniana, ary ho faly izahay hanampy anao hamaha ny olanao.
Bohemian Linen Maxi Dress
Bohemian Linen Maxi Dress $141.75 $189.00
Blue Sky / S Blue Sky / M Blue Sky / L White / S White / M White / L Yellow / S Yellow / M Yellow / L
Elastic waist trousers $64.80 $72.00
Black / One Size Blue / One Size Sky Blue / One Size Grey / One Size Pink / One Size Red / One Size
Printy Bohemian Floral Print Maxi Skirt
Printy Bohemian Floral Print Maxi Skirt $102.85 $121.00
Blue Sky / S Blue Sky / M Blue Sky / L Blue Sky / XL Army Green / S Army Green / M Army Green / L Army Green / XL Red / S Red / M Red / L Red / XL
Loza mitam-piadanana $54.75 $73.00
Blue / Mainty iray Sky Blue / One Size
Loose Draped Dress Vintage Dress
Loose Draped Dress Vintage Dress Lafo daholo $116.00
Tafio-drivotra marefo $73.80 $82.00
Navy / One Size Sky Blue / One Size
Tafiotra ho an'ny lamandy
Tafiotra ho an'ny lamandy $99.20 $124.00
Volo madinika voapoitrana
Volo madinika voapoitrana $65.70 $73.00
Green / One Size Pink / One Size Sky Blue / One Size
Vao haingana Viewed Items
Sonia mba hahazo ny farany tamin'ny varotra, boky vaovao sy ny maro hafa ...